अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीले पाउने काम र कमाइ - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ८ मंसिर २०७६, आईतवार १०:१४ |
मेलबर्न । अष्ट्रेलिया जानुको प्रमुख उद्देश्य गुणस्तरीय उच्च शिक्षा हासिल गर्नु हो । तर शिक्षासँगै काम गर्ने र अध्ययनका लागि सहयोग होस भन्ने हेतुले केही अर्थोपार्जनका लागि लाग्नु पनि स्वभाविक हो । यस्तोमा कस्तो काम पाइन्छ त अष्ट्रेलियामा ? यो जान्नु जरुरी छ ।
अष्ट्रेलियामा नेपालमा जस्तो सानो र ठूलो काम हुँदैन । काम गर्नेले पैसा पाउँछ नगर्नेले पाउँदैन । यहाँ प्रतिघन्टाका हिसाबले पैसा कमाउन सकिन्छ । अष्ट्रेलियामा नेपालीहरुका लागि केही सिमित कामहरु छन् । जुन काममा नेपालीहरुको संख्या अधिक छ ।
सबैभन्दा पहिले क्लिनिङ अर्थात सरसफाई । सुन्दा सजिलो लाग्ने तर काम गर्दा भने अप्ठ्यारो हुने यो काम नेपालबाट अष्ट्रेलिया जानेका लागि पहिलो काम बन्ने गरेको छ । यस्तो काममा पैसा पनि हुन्छ । सामान्यतया यस्तो काम गरेवापत प्रति घण्टा १५ देखि २० डलरसम्म पाउँछन् । पब क्लिनिङ, अफिस क्लिनिङलगायतमा सरसफाइको काम सहजै पाइन्छ तर ठूलो मिहेनत भने गर्नुपर्छ ।
क्लिनिङ पछाडि रेष्टुराँमा पनि काम पाउन सकिन्छ । कुकदेखि रेष्टुराँ सहयोगीका रुपमा थुप्रै कामहरु पाइन्छन् । जसमा प्रतिघण्टा १२ देखि १८ डलरसम्म पाइन्छ ।
असिस्टेन्ट इन नर्सिङ :
अष्ट्रेलियामा असिस्टेन्ट इन नर्सिङ एन आईका रुपमा पनि काम गर्न सकिन्छ । यसका लागि निश्चित रकम तिरेर तालिम लिनु पर्छ । तालिम पश्चात काम पाइन्छ । यो काम भनेको बुढाबुढीको हेरचाह गर्ने हो । यस्तो काम पाइएको अवस्थामा प्रतिघण्टा २४ डलरसम्म कमाउन सकिन्छ ।
कस्टमर केयर :
कस्टमर केयर पनि अर्को काम हुन सक्छ । जस्तै विभिन्न डिपार्टमेन्टल स्टोर, रेष्टुराँ, क्याफेलगायतका काम पाउँन सकिन्छ भने कफी मेकिङ, डेलिभरी, फिलिङ जस्ता काममा पनि नेपालीहरुले रोजगारी पाउँछन् ।
Previousअष्ट्रेलियामा एक नेपाली दम्पत्तिबीच झगडा हुँदा श्रीमानको मृत्यु, श्रीमती पक्राऊ
Nextभारतले मिचेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक
नेइमार भन्छन् , ‘म लडेको हो, अभिनय गरेको होइन’
१५ श्रावण २०७५, मंगलवार ०३:३६
३ असार २०७५, आईतवार ०२:४१
डिपेन्डेन्ट भिसामा कसरी जाने अष्ट्रेलिया ? क-कसले पाउछन् ? कसरी पाउने ?
१४ चैत्र २०७४, बुधबार ०१:५६
टेलिभिजनकर्मी रवि लामिछाने ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा
९ भाद्र २०७६, सोमबार १२:३९